အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဖေဖော်ဝါရီ(၁၃)ရဲ့ မွေးနေ့ရှင်
17 Responses to “ဖေဖော်ဝါရီ(၁၃)ရဲ့ မွေးနေ့ရှင်”
(ကျွန်တော်လည်...ဖခင်ကြီးမွေးတဲ့ လနဲ့ အတူတူပဲဗျ....။ ရာသီဖွားခြင်းရောပဲလေ....း))
ငယ်ငယ်က ကလေးဘ၀ကို ပြန်လွမ်းသွားတယ်။
မမေ့ထိုက်သူကို မမေ့မလျှော့ ဂုဏ်ပြုကြတာဟာ
မင်္ဂလာ တရားတော်နဲ့ ညီညွတ်လှပါတယ်နော်။
ကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့ ဂုဏ်ပြုပါတယ်နော်...။ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဖတ်ရတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။
ကောင်းတယ်ဗျာ .. ဒီလိုနေ့မှာ ဒီလို ဆောင်းပါးမျိူး ရေးပြီး ဂုဏ်ပြုတဲ့ အတွက် .....
ဒီနေ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ကျနော်လည်း ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ရေးပြီး ဂုဏ်ပြူခဲ့တယ်
ကျနော်က ၈၈ အရေးခင်းထဲံက အာဇာနည်နေ့မွေးထားတာ..ဟီး
နာမည်က ဇာနည်မျိုး တဲ့
ဘာပဲ ပြောပြော သမိုင်း တစ်ပုဒ်ပါပဲ။
ဆောင်းပါးတိုလေးပေမဲ့ တကယ်ထိရောက်ပါတယ်။ အားကျစိတ်၊ ၀မ်းနည်းစိတ်ကိုလဲ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သာ သက်ရှိထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးကိုလဲ တိုးပွါးစေပါတယ်။
ဖတ်သွားမှတ်သွားပါတယ်ဗျာ ။ ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
I Really Big Respect Him ....
အမ မောင်လေး လာဖတ်သွားသေးတယ်နော်--------
Attention! There isanational hero on internet ! SA--LUTE !
ညီမလေးကတော့ ဘယ်တော့မှ မေ့မှာ မဟုတ်ဘူး
This day is not only our bogyoke's birthday but also myanmar-children's day.Because our need to have children like bogyoke.
Thanks chaw for this .
I wanna advice all of myanmars to try be one like him and to welcome youth like bogyoke.